Aweys Cabdi Maxamed *Soona | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
About the Author Aweys Cabdi Maxamed *Soona
Waa wariye ka tirsan bahda Afrikaan. Waa wariye wax ka qora arrimaha siyaasadda Geeska Afrika iyo arrimaha bulshada dhaqanka iyo nabad gelyada. Qoraaga waxaa uu shahaadada heerka koowaad ee jamacadeed ka haystaa cilmiga saxaafada.
Xagee Ayey ka Toosi La’dahay Doorashada Heer Qaran ee 2021?
Aweys Cabdi Maxamed *Soona, July 23, 2020
Sanad kasta marka uu sii dhamaanayo muddo xileedka dowladda federaalka dalku wuxuu galaa olole doorasho. Su’aashu waxay tahay, waa maxay caqabadan xili walbo ishortaagta marka la gaaro ama ay soo dhawaadaan doorashooyinka heer qaran? Doorasha kasta ee dhacaysa waxaa ka hor yimaada caqabado fara badan ee loo baahanyahay in saamileyda siyaasadda ay ka heshiiyaan. Taasina waxay imaan kartaa hadii uusan jirin dastuur qeexaya qaabka doorasho iyo sidii loo qaban lahaa. Marar badan Xiliyada Doorashada marka la gaaro dalka Soomaaliya waxaa soo wajaha wareer ku aadan qaabka doorasho ee dalka uu yeelanayo. Arrintaas waxay ka dhalataa dowladda oon muddo xileedkeeda ugu …